ပါတေး၊ ရိုကာ၊ ချာကာတို့နဲ့ အာဆင်နယ်အပြောင်းအရွှေ့တို့ရဲ့လားရာ – Sports A2Z
ပါတေး၊ ရိုကာ၊ ချာကာတို့နဲ့ အာဆင်နယ်အပြောင်းအရွှေ့တို့ရဲ့လားရာ
အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ လာမယ့်ရာသီအတွက် အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ချိတ်ဆက်နေရာမှာ ကွင်းလယ်ကစားသမား တစ်ယောက်ကို မဖြစ်မနေ ခေါ်ယူဖို့ လျာထားတယ်ဆိုပေမယ့် အခြေအနေပေးရင် ၃ ယောက်အထိ ခေါ်ယူနိုင်ပြီး ဘာစီလိုနာက အငှားနဲ့ ရောက်လာနိုင်တဲ့ ဖလိပီ ကော်တင်ညိုရဲ့ နောက်က ထောက်ပံ့ပေးမယ့်ကွင်းလယ်အတွက် စဉ်းစားစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
¡ AVANTI BETIS ! ????? pic.twitter.com/OvM1ojt8XQ
အသင်းမှာ အငှားနဲ့ ကစားနေပေမယ့် သို့လောသို့လောဖြစ်စရာ ပို့စ်တွေကို တွစ်တာမှာ ခဏခဏတင်လေ့ရှိပြီး နောက်ဆုံးပို့စ်မှာ Next Betis လို့ ဆိုထားခဲ့တဲ့ ဒါနီ စီဘာယော့စ်နေရာအတွက် ကစားသမားတစ်ဦး ဖြည့်ဆည်းဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် လူငယ်တွေထဲက အသုံးပြုရဖို့ ရှိနေပြီး လက်ရှိမှာတော့ အာဆင်နယ်ရဲ့ ကွင်းလယ်တားဂက်တွေက ဒီလိုနေရာကိုလည်း ကစားပေးနိုင်တဲ့သူမျိုး ပါဝင်နေခဲ့တာပါ။
စပိန်လာလီဂါကလပ် အက်စ်ပန်ညိုနဲ့ လျော်ကြေးစာချုပ် ပေါင် ၃၆ သန်း ပါရှိနေပြီး ပေါင် ၂၂ သန်းလောက်နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်မယ့် မာ့ခ် ရိုကာဟာ ကွင်းလယ်မှာ စီဘာယော့စ်နေရာကို အစားထိုးနိုင်သလို ဘယ်သန်ကစားသမားအဖြစ် ကွင်းလယ်အဖျက်နဲ့ Deep Lying Playmaker နေရာတွေကို တာဝန်ယူပေးနိုင်လို့ သူ့ကို ခေါ်ယူရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲလို့ အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေ အတွေးပွားနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်တာကတော့ မာ့ခ် ရိုကာကို တကယ်တမ်း အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင် အသင်းကနေ နေရာဖယ်ပေးရမယ့်သူက ဆွစ်ဇာလန်ကွင်းလယ်လူ ဂရာနစ် ချာကာဖြစ်လာဖွယ်ရှိပြီး သူ့အတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ အသုံးစရိတ်ကို ကာမိနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပြီး သောမတ်စ် ပါတေးရဲ့ ခေါ်ယူမှုကိုတော့ နှစ်ဦးထဲက တစ်ဦးပဲ ရွေးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်လာဖို့ မရှိဘဲ ကွင်းလယ်အထိုင်နှစ်ဦးရဲ့ ညာခြမ်းမှာ မာမာထန်ထန်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်သွားဖို့ကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းနေပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ လူးကပ်စ် တော်ရဲရားကိုလည်း အီတလီမြေကို ရောင်းချသွားနိုင်ပြီး အာတီတာအတွက် ကွင်းလယ်အထိုင်ဟာ ပါတေးနဲ့ ရိုကာတို့ နှစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်သလို တစ်ဦးက အဖျက်နဲ့ တစ်ဦးက ဘောလုံးအချင်းအကျင်းကို လုပ်ဆောင်လာဖွယ်ရှိပြီး အသင်းတစ်သင်းရဲ့ အင်ဂျင်လို့ ခေါ်တဲ့ ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာတော့ ကြီးကြီးမားမား အပြောင်းအလဲတွေကို အပြောင်းအရွှေ့ဖွင့်ချိန်မှာ မြင်တွေ့ရနိုင်မယ်လို့ သုံးသပ်နေကြကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
REF: THE BOOT ROOM
UNICODE: အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ လာမယျ့ရာသီအတှကျ အသငျးရဲ့ ကှငျးလယျကို ဖွညျ့ဆညျးဖို့ ခြိတျဆကျနရောမှာ ကှငျးလယျကစားသမား တဈယောကျကို မဖွဈမနေ ချေါယူဖို့ လြာထားတယျဆိုပမေယျ့ အခွအေနပေေးရငျ ၃ ယောကျအထိ ချေါယူနိုငျပွီး ဘာစီလိုနာက အငှားနဲ့ ရောကျလာနိုငျတဲ့ ဖလိပီ ကျောတငျညိုရဲ့ နောကျက ထောကျပံ့ပေးမယျ့ကှငျးလယျအတှကျ စဉျးစားစရာဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
အသငျးမှာ အငှားနဲ့ ကစားနပေမေယျ့ သို့လောသို့လောဖွဈစရာ ပို့ဈတှကေို တှဈတာမှာ ခဏခဏတငျလရှေိ့ပွီး နောကျဆုံးပို့ဈမှာ Next Betis လို့ ဆိုထားခဲ့တဲ့ ဒါနီ စီဘာယော့ဈနရောအတှကျ ကစားသမားတဈဦး ဖွညျ့ဆညျးဖို့၊ ဒါမှမဟုတျ လူငယျတှထေဲက အသုံးပွုရဖို့ ရှိနပွေီး လကျရှိမှာတော့ အာဆငျနယျရဲ့ ကှငျးလယျတားဂကျတှကေ ဒီလိုနရောကိုလညျး ကစားပေးနိုငျတဲ့သူမြိုး ပါဝငျနခေဲ့တာပါ။
စပိနျလာလီဂါကလပျ အကျဈပနျညိုနဲ့ လြျောကွေးစာခြုပျ ပေါငျ ၃၆ သနျး ပါရှိနပွေီး ပေါငျ ၂၂ သနျးလောကျနဲ့ ချေါယူနိုငျမယျ့ မာ့ချ ရိုကာဟာ ကှငျးလယျမှာ စီဘာယော့ဈနရောကို အစားထိုးနိုငျသလို ဘယျသနျကစားသမားအဖွဈ ကှငျးလယျအဖကျြနဲ့ Deep Lying Playmaker နရောတှကေို တာဝနျယူပေးနိုငျလို့ သူ့ကို ချေါယူရငျ ဘာတှဖွေဈလာနိုငျလဲလို့ အာဆငျနယျပရိသတျတှေ အတှေးပှားနခေဲ့ကွတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဖွဈနိုငျတာကတော့ မာ့ချ ရိုကာကို တကယျတမျး အသုံးခနြိုငျမယျဆိုရငျ အသငျးကနေ နရောဖယျပေးရမယျ့သူက ဆှဈဇာလနျကှငျးလယျလူ ဂရာနဈ ခြာကာဖွဈလာဖှယျရှိပွီး သူ့အတှကျ ပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ အသုံးစရိတျကို ကာမိနိုငျဖို့ လုပျဆောငျသှားနိုငျပွီး သောမတျဈ ပါတေးရဲ့ ချေါယူမှုကိုတော့ နှဈဦးထဲက တဈဦးပဲ ရှေးဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုးဖွဈလာဖို့ မရှိဘဲ ကှငျးလယျအထိုငျနှဈဦးရဲ့ ညာခွမျးမှာ မာမာထနျထနျနဲ့ အသုံးပွုနိုငျမယျ့ အခှငျ့အရေးကို လကျလှတျသှားဖို့ကတော့ ဖွဈနိုငျခွနေညျးနပေါတယျ။
အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ လူးကပျဈ တျောရဲရားကိုလညျး အီတလီမွကေို ရောငျးခသြှားနိုငျပွီး အာတီတာအတှကျ ကှငျးလယျအထိုငျဟာ ပါတေးနဲ့ ရိုကာတို့ နှဈဦးဖွဈလာနိုငျသလို တဈဦးက အဖကျြနဲ့ တဈဦးက ဘောလုံးအခငျြးအကငျြးကို လုပျဆောငျလာဖှယျရှိပွီး အသငျးတဈသငျးရဲ့ အငျဂငျြလို့ ချေါတဲ့ ကှငျးလယျပိုငျးမှာတော့ ကွီးကွီးမားမား အပွောငျးအလဲတှကေို အပွောငျးအရှဖှေ့ငျ့ခြိနျမှာ မွငျတှရေ့နိုငျမယျလို့ သုံးသပျနကွေကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။